जाँदाजाँदै ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा के छोडेर गए जसले बाइडेन खुसीले गदगद भए ? – Dcnepal
मल आयातमा नौलो सुरुवात गर्दै कृषि मन्त्रालय
दुई दिन मै विप्लव समूहसँग कसरी भयो सहमति?
मलको समस्या रहिरहन नदिन सातै प्रदेशमा मलको भण्डारण गरिन्छ : मन्त्री अर्याल
थाहा नगरपालिकामा ८० प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माण
सरकार र विप्लव नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्रीको साथमा विप्लव सार्वजनिक हुने
नेपालसँग सिधा उडान संचालन गर्न पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सलाई आग्रह
नेपाल भारत जाेड्ने बैतडीकाे नाका सञ्चालनमा नआउँदा समस्या
युएईबाट अनु भन्छिन्-अब म गुहार माग्न कहाँ जाउँ?
प्रकाशित : २०७७ माघ ८ गते १४:१४
काठमाडौं। डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा सत्ता हस्तान्तरणको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेनन् । ट्रम्प न जो बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भए न बाइडेनलाई भेटेर उनलाई बधाइ दिए । तर, ट्रम्पले ह्वाइट हाउस छोड्नुअघि आफ्ना उत्तराधिकारी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि खुला मनले एक पत्र लेखेर छाडेका थिए । बाइडेन स्वयंले यसको जानकारी दिएका हुन् ।
सीएनएनको रिपोर्टअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यभार ग्रहण गरेपछि ओभल अफिसमा पहिलो दिन केही कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि बाइडेनले पत्रकारहरुसँग कुरा गरेका थिए । बाइडेनले भने ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले खुला मनले मलाई एउटा पत्र लेख्नुभएको छ ।’ बाइडेनले पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुराको जानकारी आफूले अहिले दिन नसक्ने बताए । बाइडेनले यो निजी कुराकानी भएकोले ट्रम्पसँग कुरा नगरी आफूले पत्रमा लेखिएको कुराबारे केही नबताउने बताए ।
ट्रम्पका एक बरिष्ठ सहयोगीले सीएनएनसँगको कुराकानीमा यो एक व्यक्तिगत नोट भएको बताए । ती सहयोगीका अनुसार यो पत्रमा देश र नयाँ प्रशासनको सफलताको कामना गरिएको छ । सूत्रका अनुसार ट्रम्पले अन्तिम रात ओभल अफिसमा गर्नुपर्ने कामको सूचीमा बाइडेनको लागि पत्र लेख्ने काम पनि थियो । अमेरिकामा पछिल्लो समय विदा हुने राष्ट्रपतिले नयाँ आउने राष्ट्रपतिलाई अफिसमा पत्र छोडेर जाने परम्परा बनेको छ ।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउस छोडेपछि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा बाइडेनलाई लेखेको पत्रबारे केही बताएका थिएनन् । एक सूत्रका अनुसार ट्रम्पले आफूले लेखेको पत्र आफ्ना कैयौं सहयोगीलाई पनि देखाएनन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जनरल जेन साकीसँग बुधबार राती भएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रबारे सोधिएको थियो । जवाफमा उनले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरिन् । जेनले बाइडेनले बताएअनुसार यो निजी नोट भएको र त्यसमा राम्रो कुराहरु लेखिएको बताइन् ।
यसअघि २०१७ मा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि डोनाल्ड ट्रम्पको लागि यस्तै पत्र छाडेर गएका थिए । त्यो पत्र पढेर ट्रम्प यति उत्साहित भएका थिए कि उनले ओबामासँग कुरा गर्न तत्काल फोन गरेका थिए । तर, ओबामा त्यतिबेला एउटा उडानमा भएकोले फोन उठाउन भने सकेका थिएनन् । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट विदाइ हुने बेला गरेको भाषणमा बाइडेनको नाम नलिइ नयाँ प्रशासनलाई शुभकामना दिएका थिए । ह्वाइट हाउस छोड्दै गर्दा उनले यो विदाइ धेरै लामो समयको लागि नहुने बताएका थिए । जसको अर्थ उनी २०२४ मा फेरि चुनाब लड्ने सोचमा छन् ।
पार्टीमा कसैले धेरै राजनीति बुझे कसैले कम : मिलन पाण्डे
मृत्युदण्ड पाएकी आमाले १२ वर्षका छोरालाई के भनिन् ? अपराध गर्दा यी छोरा गर्भमा थिए
ग्याङका नेताको हत्या भएपछि ४ वटा जेलमा कैदीहरुबीच भिडन्त, कम्तीमा ७९ जनाको मृत्यु